April 2014 ~ (IT) ကိုထိုက်
6:53 AM nokia No comments
6:43 AM Y535-C00 Root & MM Font installe 1 comment
Hacking နှင့်ပတ်သက်သမျှ အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ EBook ၄၅ အုပ်ကျော်စုစည်းမှု
6:33 AM Hacking Ebook No comments
Hacking, Cracking, Wifi Network
ပိုင်း လေ့လာလိုသူများအတွက် တန်ဖိုးရှိတဲ့ မှတ်စုများ၊ ebook များ
စုစည်းပေးထား တာဖြစ်ပါတယ်.. hack ဖို့ စိတ်မ၀င်စားသည့်တိုင် hacking
ဆိုင်ရာ ဗဟုသုတများ ရရှိပြီး ကိုယ်တိုင်လည်း hacker များရန်မှ ကင်းဝေးအောင်
ရှောင်ရှားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်.. keylogger, phishing အကြောင်း၊ botnet
အကြောင်း၊ backtrack အကြောင်း၊ wifi အကြောင်းများ အပြင် ....
Facebook hack ခံ ရခြင်းမှ ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ
GMAIL မှားယွင်းဖျက်မိသောcontact များကိုပြန်လည်ရယူခြင်း
Wifi မှန်သမျှ လွယ်လွယ်ဟက်မယ်.... စသည်နှင့် အခြားစာအုပ်ပေါင်းများစွာ.. ပါဝင်ပါတယ်..
Credit to: Frozen
စက်ရုပ်တွေနဲ့ သေနတ်ပစ်ခတ်ရမယ့်ဂိမ်း - Neon Shadow v1.33 APK
6:29 AM Android Game No comments
ဂြိုလ်သားတွေလိုလိုစက်ရုပ်တွေလိုလိုအကောင်တွေနဲ့ တိုက်ခိုက်ရမယ့် Game လေးဖြစ်ပါတယ်။ လက်နက် အဆန်းပြားတွေနဲ့ ထူးထူးဆန်းဆန်းအခန်းတွေထဲမှာ ပစ်ခက်ရတဲ့ Game ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်က Game ကစားရတာသိပ်ပြီးဝါသနာမပါလို့လားမသိဘူး စမ်းပြီးကစားကြည့်တာ ခဏခဏ ရှုံးနေတယ်ဗျာ။ အဲဒီတော့ အခု Game ကိုသေချာလေးမရှင်းပြနိုင်တာနားလည်ပေးပါနော်။ သေချာတာတစ်ခုကတော့ ရုပ်ထွက်နဲ့ အသံကတော့ ရှယ်ဘဲဗျာ။ တော်တော်လေးမိုက်တယ်။ Data ပါလိုတယ်ဆိုတော့ Install လုပ်ပုံက ထုံးစံအ တိုင်းပါဘဲ APK ကိုအရင်ဆုံး Install လုပ်ပြီး Download ဆွဲလို့ရလာတဲ့ Folder ကို Copy ကူးယူပြီး SD Card/Android/Obb Folder ထဲကို Paste လုပ်ပြီး ကစားနိုင်ပါပြီဗျာ။ Obb Folder မရှိပါက Folder အသစ်လုပ်ပြီးကစားနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ Android OS 2.2 နှင့်အထက်ဖုန်းများမှာကစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။
6:28 AM Hacking software No comments
ခုတလော facebook အကောင့်တွေ gmail တွေ အဟက်ခံရတာကို ခဏခဏ ကြားနေရပါတယ်။ နည်းပညာဗဟုသုတအားနည်းလို့ အဟက်ခံရသလို ပညာရှိသတိဖြစ်ခဲလို့လဲ အဟက်ခံနေကြရခြင်းပါ။ မမိုးသိသလောက် မမိုးအကောင့်ကို ဘယ်လိုကာကွယ်ထားလဲ ဆိုတာလေး နည်းပညာအားနည်းသူများအတွက် ပြန်လည်မျှဝေပေးပါတယ်။ နှစ်သစ်မှာ မိမိ account လေးများကို မိမိကိုယ်တိုင်ကာကွယ်နိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်။
Hacker တွေ account တွေကို ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေ သုံးပြီး hack နေကြလဲ ?
လေ့လာမိသလောက်လေးပါ၊ Hacking နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ Hack နည်းတွေ ဒါပဲရှိတာမဟုတ်ဘူးနော်။ လတ်တလော ကြုံနေရတဲ့ Hack နည်းတွေကို ရှောင်ရှားနိုင်ဖို့ပါ။ account များ ပေါပါတယ်၊ အလကားရနေတာပဲလို့ မမှတ်နဲ့နော်၊ ကိုယ့်အကောင့် ကိုယ်သုံးလာတဲ့ အချိန်ပေါ် မူတည်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့ personal တွေ အများကြီးရှိနေတယ်ဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့။ အဟက်ခံရပြီးမှ ပြန်လိုက်ရတာထက် ကြိုပြီး ကာကွယ်နိုင်တော့ မမှားဘူးပေါ့။
ခုတလော ဟက်ကာတွေ ဟက်နေတဲ့ နည်းလမ်းတွေကတော့
3. Add ons စတာတွေကို အဓိကသုံးပြီး Hack နေကြတာပါ။
4. trusted contacts ဒါကတော့ ခုမှ စပြီးသုံးနေတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ အရင်ကသိပ်မကြားဖူးလို့ပါ။
Phishing ဆိုတာ Facebook, Gmail စတာတွေရဲ့ Home Page အတုတွေပါ။ Phishing တွေကို ဘယ်ကနေ တွေ့နိုင်လဲ? လွယ်ပါတယ် Hack မယ့်သူက မျှားထားတဲ့ page အတုတွေပါ။ link လေး တခုချထားပေးမယ်၊ အဲဒီ link ကို click လိုက်တာနဲ့ Facebook Log in page, Gmail Log in page လေး ကျလာမှာပါ။ ဒါကို ကိုယ်က နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ အားနည်းတော့ မသိပဲ email နဲ့ password ကို ရိုက်ပြီး ၀င်လိုက်တာနဲ့ Hacker ရဲ့ ထောင်ချောက်ထဲရောက်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့ gmail နဲ့ facebook account တွေ Hacker ရဲ့ Hosting လို့ခေါ်တဲ့ online ပေါ်က နေရာလေး တခုမှာ ရောက်သွားပါတယ်။
ဒါဆို ကိုယ့်ရဲ့ အကောင့်က Hacker ရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုကို ခံရပြီပေါ့။ ဒီအကောင့်ကို ပြန်ပြီး လိုက်လို့မရနိုင်ဘူးလား ဆိုတော့ အချိန်ပေးပြီး နည်းပညာသုံးပြီး ပြန်လိုက်မယ်ဆိုရင် ရလဲ ရနိုင်သလို မိမိအကောင့်က Hacker ရဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုပေါ်မူတည်ပြီး ချယ်လှယ်တာခံလိုက်ရရင်တော့ အခြေအနေတမျိုးဖြစ်သွားမှာပေါ့။ ဒါကြောင့် ဒီစာပိုဒ်လေးကို ဖတ်ပြီးရင် မိမိနဲ့ မရင်းနှီးတဲ့ သူ ပေးတဲ့ မည်သည့် link ကိုမှ Click မနှိပ်မိပါစေနဲ့။ Link ကို နှိပ်လိုက်ရင် Email and Password တောင်းပြီဆိုရင် ပိတ်လိုက်ပါ။ လုံးဝ မရိုက်ထည့်လိုက်ပါနဲ့။ ဒါဆို Phishing နဲ့ hack ခြင်းကို ကာကွယ်နိုင်ပြီပေါ့။
ပထမဆုံး Keylogger အကြောင်းပြောပြမယ်။ Keylogger ဆိုတာ ကိုယ့်ရဲ့စက်ထဲမှာ ကိုယ် မမြင်ရပဲ အနောက်မှာ run နေပြီး ကိုယ့်ရဲ့ အချက်အလက်တွေကို Keylogger ရဲ့ ပိုင်ရှင်ရဲ့ email ဆီသို့ အဆက်မပြတ် ပေးပို့နေသော ထောက်လှမ်း ဆော့ဝဲတမျိုးပါ။ Keylogger အမျိုးအစားတွေမှာ keylogger ၀င်နေတဲ့စက်မှာ အချိန်ကိုက် screen shoot ဓာတ်ပုံရိုက်သွားတဲ့ keylogger (ဒီ keylogger လေး ကို အသုံးပြုနေတဲ့ user မှ လုံးဝမသိနိုင်ဘဲ keylogger software သွင်းထားသူသာ ကိုယ်ပိုင် password ဖြင့် ၀င်ရောက် ကြည့်ရှုနိုင်ပြီး အကျိုးပြုတဲ့ keylogger ဆိုလဲ မမှားပါဘူး၊ ဘာကြောင့် အကျိုးပြုလဲဆိုတော့ မိဘတွေ ကိုယ့်သားသမီးတွေ Internet ကို ဘာတွေအတွက် သုံးနေကြလဲ? မကြည့်သင့်တာတွေ ကြည့်နေလား? မသုံးသင့်တာတွေ သုံးနေလား? စသည်ဖြင့် သိစေတဲ့အတွက် အကျိုးပြု keylogger လို့ မမိုးနာမည်ပေးထားတာပါ။ နောက်တခု အကျိုးမဲ့ keylogger။ ဒါကတော့ hacker တွေရဲ့ လက်စွဲပါ။
keylogger တခုကို software သုံးပြီး ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးလို့ရနိုင်သလို online ပေါ်ကရနိုင်တဲ့ keylogger တွေ အများကြီးမို့ hacker တွေအတွက် အလွယ်တကူ အသုံးပြုနေတဲ့ နည်းတခုပါ။ ဒီထက် အဆင့်မြင့်တဲ့ programming language တွေနဲ့ အဆင့်မြင့်မြင့်ရေးလို့ ရပါသေးတယ်။ ကဲဒါတော့ ထားလိုက်ပါတော့။ Hacker တွေ user တွေရဲ့ စက်ထဲကို keylogger ကို ဘယ်လိုထည့်လဲဆိုတာ နည်းနည်းပြောပြမယ်နော်။ user တွေ စိတ်ဝင်စားတဲ့ photo, ebooks, video,... စတာတွေမှာ ကပ်ပြီး user တွေဆီ ချပေးပါတယ် ဒါကို မသိပဲ download လုပ်မိပြီး double click နှိပ်လိုက်တာနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့စက်ထဲမှာ သကောင့်သားက မွှေတော့တာပဲ၊ ပြီးရင် သူ့သခင်ဆီကို အချက်အလက်တွေ အဆက်မပြတ် ပို့တော့တာပေါ့။ key ရိုက်သမျှ အားလုံး ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ keylogger ပိုင်ရှင်ရဲ့ email ကို data တွေ ပို့ပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းနဲ့ user ရဲ့ အကောင့်၊ password ကို hacker တွေ ရရှိရတာပါ။
Keylogger ပိုင်ရှင်တွေ ဘယ်လို အရာတွေကို keylogger မြှုတ်တတ်သလဲ? အရိုးရှင်းဆုံးပါ၊ လူအများ စိတ်ဝင်စားနိုင်တဲ့ လတ်တလော ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ photo, video တွေကို အသုံးချတတ်ပါတယ်၊ ဥပမာ - မလေးရှားလေယာဉ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ video file လေးပါ၊ သတင်းကို စိတ်ချရတဲ့ သတင်းဌာနတွေကပဲ ဖတ်သင့်ပါတယ်၊ video ကိုလဲ သတင်းဌာနတွေကပဲ တိုက်ရိုက် ကြည့်သင့်ပါတယ်။ နောက်တခု sexy နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဓာတ်ပုံတွေ video တွေကို ရှောင်သင့်ပါတယ်။ ဒါတွေက hacker တွေရဲ့ ထောင်ချောက်တွေဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့။
မမိုးကြုံဖူးတာလေး တခုကို ဗဟုသုတအနေနဲ့ ပြောပြချင်ပါတယ်။ ebooks တအုပ်ကို ဒေါင်းဖို့ ဖွင့်လိုက်တာ လေးထောင့်တွေပဲ တွေ့ရတယ် ကိုယ့်ရဲ့ အကျင့်ကလဲ ကိုယ်ယုံကြည်တဲ့သူမဟုတ်ရင် အဲစာအုပ်ကို အရင် သေချာ စစ်တတ်တယ်။ လေးထောင့်တွေဆိုတော့ မသင်္ကာလို့ save လုပ်ပြီး notepad ထဲပြောင်းကူးတော့ script တွေနဲ့ ရေးထားတဲ့ keylogger တမျက်နှာ တိတိတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ဒါကတော့ ဗဟုသုတအဖြစ်ပြောတာနော်။
keylogger စစ်ဖို့ မမိုးကတော့ စက်ထဲမှာ MSE (Microsoft Security Essential) နဲ့ Malwarebytes ၂မျိုးနဲ့ အမြဲတမ်း စစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ စက်ထဲမှာ keylogger ရှိပြီလို့ ထင်ရင် windows ချလိုက်တာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ တခုတော့ သတိပေးချင်တယ် ကိုယ်ကတော့ ဒါတွေကို ရှောင်ပေမယ့် ကိုယ့်စက်မှာ မျှယူသုံးစွဲသူက မရှောင်ရင်လဲ hacker ရဲ့ ထောင်ချောက်ထဲ သက်ဆင်းရမှာမို့ အကောင်းဆုံး အကြံပေးချင်တာကတော့ computer တလုံးကို ၁ယောက်ထဲ သုံးစေချင်တယ်။
ဒါမှမဟုတ် မျှဝေသုံးစွဲသူကို ဗဟုသုတလေးတွေ ပြောပြထားသင့်တယ်။ နောက်တနည်းက ကိုယ့်ရဲ့ password ကို keyboard ကနေ ရိုက်မ၀င်ပဲ windows မှာ ပါတဲ့ on screen keyboard မှ ၀င်သည်ဖြစ်စေ၊ notepad တွင် password ကို save ထားပြီး အကောင့်ဖွင့်တိုင်း copy and paste နဲ့ ၀င်ပေါ့။ အချို့ အဆင့်မြင့် keylogger တွေ on screens keyboards ရော notepad ကိုရော ရှာနိုင်တယ်လို့ နိုင်ငံခြား ဆိုဒ်တခုမှာ ဖတ်ဖူးပါတယ်။
ဟုတ်မဟုတ် မမိုးလဲ မကြုံဖူးလို့ အတတ်မပြောနိုင်ပါဘူး။ အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းကတော့ ကိုယ့်ရဲ့စက်ကို မှန်မှန်လေး စစ်ပေးသင့်ပါတယ်။ ဒီလောက်ဆို keylogger ကို ကာကွယ်နိုင်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
Hacker တွေရဲ့ အဓိက ပစ်မှတ်တခုပေါ့။ လတ်တလော အသုံးအများဆုံး hack နည်းလေးပါ။ add ons တခု ဖန်တီးပြီး ဒီ add ons လေးကတော့ internet connection ကို ၂ဆတို့ ၄ဆတို့ ဆိုပြီး မက်လုံးပေးပြီး link ကို ချပေးတတ်တယ်။ ဒါကို ယုံကြည်တဲ့သူတွေက install လုပ်တော့ အကောင့်တွေ တန်းစီပြီး ပါပြန်ရောပေါ့။ အရင်က Mozilla Firefox တခုကိုပဲ target ထားလို့ firefox သုံးတဲ့သူတွေ တော်တော်များများ ခံလိုက်ကြရပါတယ်။
ခု Maxthon browser ဘက်ကို ဦးတည်နေကြပြီ။ ဘယ်အတွက်ပဲ ထုတ်ထား ထုတ်ထား အဓိက ကိုယ်မသုံးမိရင် အကောင့်ပါမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ မမိုးဆို add ons ဘယ်တော့မှ သုံးလေ့မရှိပါဘူး။ add ons တောင်းတဲ့သူတွေကိုလဲ browser ရဲ့ official site မှာပဲ ရှာပြီး ပေးလေ့ရှိပါတယ်။ သေချာမသိရင် ဘာမှမသုံးတာ အကောင်းဆုံးပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ account ကို ကိုယ်တိုင်ကလွဲပြီး ဘယ်သူမှ မကာကွယ်နိုင်ပါဘူး။
မိမိ account lock ကျရင် trusted contacts မှာ ထည့်ထားတဲ့ သူငယ်ချင်း အနည်းဆုံး (၃)ယောက်ဆီကို facebook မှ code ပို့ပေးခြင်းပါ။ ဒီနည်းနဲ့ ဘယ်လို hack မလဲ စဉ်းစားစရာနော်။ မမိုးသေချာတော့ မရေးပြတော့ဘူး မသမာသူလက်ထဲကို ရောက်မှာ ဆိုးလို့ပါ။ အဓိက အချက်ကိုပဲ ပြောတော့မယ်။ trusted contacts list မှာ မိမိ ကိုယ်ပိုင် account များကိုသာ ထည့်ထားသင့်ပါတယ်။ ဒီလောက်ပဲ အကြံပြုပါရစေ။ သူခိုးဓားရိုးမကမ်းချင်လို့ပါ။
မမိုးရေးတဲ့ ဒီစာပိုဒ်လေးက နည်းပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဗဟုသုတ အနည်းငယ် ရခဲ့မယ်ဆိုရင် ကျေနပ်ပါတယ်။ IT Family Magazine မှာ ရေးဖို့ စဉ်းစားထားပေမယ့် အချိန်မလုံလောက်လို့ မရေးဖြစ်ခဲ့ပါ။ ဘယ်အချိန်ရေးရေး ဘယ်နေရာရေးရေး စာဖတ်သူ ဗဟုသုတ အနည်းငယ် ရသွားတယ်ဆိုရင်ပဲ ၀မ်းသာပါတယ်။ Hacking က ဒါပဲလားလို့တော့ မပြောနဲ့နော်။ သိချင်ရင် Hacker တွေဆီသာ တိုက်ရိုက်သွားမေးကြပါ။ မမိုးဘာမှမသိပါဘူး။ ကိုယ့် account ကိုယ် ကာကွယ်ထားရုံလေးကို ပြန်လည်မျှဝေတာပါ။
6:16 AM နည်းပညာ သတင်း No comments
သီဟနိုင် on 2014-04-26 11:42
လိပ်နင်ဂျာဖိုက်တင်ဂိမ်း - TMNT: ROOFTOP Run v2.0.23 APK
6:13 AM Android Game No comments
Android User တွေအတွက် ဖိုင်တင်ချဖို့ Game လေးတစ်ခုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ ပုံမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်း လိပ်နင်ဂျာ တွေနဲ့လူဆိုးတွေနဲ့ချရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်းမကစားဖူးသေးပါဘူး။ Game ကစားတာ ၀ါသနာမပါလို့ပါ။ ဒါပေမယ့် ကစား လို့ကောင်းမယ့် Game ပုံစံလေးပါ။ Game ရဲ့ ပုံစံကို နမူနာအနေနဲ့ ကြည့်နိုင်ဖို့အောက်မှာ Screen Shot တွေပြထားပါတယ် ဗျာ။ Android OS 2.3.3 နှင့်အထက်ဖုန်းများမှာ ကစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။
6:12 AM IT ဗဟုသုတ No comments
၁၆။ အွန်လိုင်း exchange တစ်ခုဖြစ်သည့် eBay တွင် တစ်စက္ကန့်၌ ပျမ်းမျှ ငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆၈၀ တန်ဖိုး အရောင်းအဝယ် ဖြစ်လျက်ရှိ သည်။
အကြောင်းပြချက်-Disk operating system တွင်ပင် CON အပြင် PRN, AUX, NUL အစရှိသော နာမည်တွေမျိုးကိုလည်း ပေး၍ မရပါ။ ၎င်းတို့၏ reserved name များဖြစ်သည့်အတွက် အကယ်၍ပေးလျှင် default file name တစ်ခုခုကို အော်တိုပြန်ပြီး redirect လုပ်သောကြောင့် windows က ယင်း ကဲ့သို့နာမည်ပေးခြင်းကို တားမြစ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
Credit : http://blog.techspace.com.mm/2012
Driver အတွက် အခတ်အခဲဖြစ်နေရင် ဒါလေးက ကူညီဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါတယ်... Update Version ပါ.. အောက်မှာ ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်..။
မိမိရဲ့ဖုန်းကို Virus ရန်မှာကင်းဝေးစေဖို့အတွက် - Virus Shield v2.2 APK
3:58 AM Android No comments
အခုတင်ပေးလိုက်တာကတော့ Android Phone တွေမှာ Virus စစ်ပေးနိုင်တဲ့ Application လေးတစ်ခုဖြစ်ပါ တယ်ဗျာ။ ကျွန်တော်စမ်းသုံးကြည့်တာ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ အသုံးပြုရလွယ်ကူအဆင်ပြေလို့ သူငယ်ချင်းများ ကို မျှဝေပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ Virus Shield က နောက်ကွယ်ကနေ အမြဲတမ်း Run ပေးနေတဲ့အတွက် မိမိရဲ့ဖုန်းဟာ Virus အန္တရယ်မှ အချိန်ပြည့် လုံခြုံစိတ်ချနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ကွယ်က Run နေတဲ့အ တွက် Phone ကိုလေးလံစေခြင်း Battery ကုန်မြန်ခြင်းတို့လည်းမဖြစ်ပေါ်စေပါဘူး။ Android OS 2.2 နှင့် အထက်ဖုန်းများမှာအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။
3:53 AM ကျန်းမာရေး No comments
စ) ၃၉ ပါတ်ကြာရင် Cough ချောင်းဆိုး၊ Wheeze ရင်ကြပ်တာတွေကောင်းလာပြီး အဆုပ်ရဲ့  ၁၀%ပိုကေင်းလာမယ်။
ဆ) ၅ နှစ်နေရင် ဆေးလိပ်သောက်တဲ့သူတွေထက် နှလုံးသွေးကြောပိတ်တဲ့နှုန်းက တစ်ဝက်ကျသွားလိမ့်မယ်။
ဇ) ၁၀ နှစ်နေရင် Lung Cancer အဆုပ်ကင်ဆာဖြစ်တဲ့နှုန်းက ဆက်သောက်သူတွေထက် ထက်ဝက်ကျသွားမယ်။
၂) သွေးလေလှည့်ပတ်တာ မကောင်းတဲ့ရောဂါကြောင့် ခြေလက် ပုပ်တာ၊ ဖြတ်ရတာတွေ နည်းသွားမယ်။
၃) ကိုယ်နဲ့ အတူနေထိုင်တဲ့သူတွေကို ဆေးလိပ်ပြာတွေ၊ မီးခိုးတွေကတစ်ဆင့် အန္တရာယ်ဖြစ်စေတာတွေကို နည်းသွားစေမယ်။ ဆေးလိပ်ပြာတွေ၊ မီးခိုးတွေထဲမှာ Arsenic အာဆင်းနစ်ဓာတ်၊ Benzene ဘင်ဇင်းဓာတ် နဲ့ Cyanide ဆိုင်ယာနုိုက်ဓာတ် တွေပါတယ်။ Arsenic အာဆင်းနစ်ဓာတ် နဲ့ Benzene ဘင်ဇင်းဓာတ် တွေက ကင်ဆာဖြစ်စေတတ်တယ်။
၄) ကိုယ့်ရဲ့  ရင်သွေးတွေ Bronchitis အဆုတ်ပြွန်ရောင်၊ Pneumonia အဆုတ်အအေးမိ၊ Asthma ပန်းနာရောဂါ၊ Meningitis ဦးဏှောက်အမှေးရောင်ရောဂါနဲ့ Ear Infection နားပြည်ယိုတာတွေ နည်းသွားစေမယ်။
၅) ကလေးလိုချင်တဲ့သူတွေ ကလေးမြုံတာနည်းသွားပြီး ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရင်လည်း ရင်သွေးက ကျန်းမာမယ်။
၆) အဆုပ်ကင်ဆာ၊ နှလုံးနဲ့ အဆုပ်ရောဂါတွေကြောင့်ဖြစ်မဲ့ မကျန်းမာမှု၊ သေဆုံးမှုတွေ နည်းသွားမယ်။
ဂ) အသားအရည် စိုပြေလာပြီး သွားတွေလည်း ပိုလှလာမယ်။ ဆေးလိပ်သောက်တဲ့သူတွေက ရုပ်ရင့်တယ်။
၁၀) ကိုယ်စီးတဲ့ကားနဲ့ မိမိအိမ် အနံ့အသက်တွေ ကောင်းလာပြီး မီးဘေးအန္တရာယ်ကလည်း နည်းသွားမယ်။
HIV ရှိ မရှိကို အိမ်မှာ ကိုယ့်ဖါသာကိုယ် စမ်းသပ်နိုင်တဲ့ကိရိယာ အလွယ်ဝယ်လို့ရပြီ
3:52 AM ကျန်းမာရေး No comments
• ဗြိတိန်မှာ ပဌမဆုံးအကြိမ်ခွင့်ပြုလိုက်တာပါ။ ၁၉၉၂ ကတည်းကတားမြစ်ထားတာကို ဖယ်ရှားလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
• သူတို့နိုင်ငံမှာ HIV ပိုးရှိနေသူပေါင်း တစ်သိန်းရှိတယ်။ ရှိမှန်းမသိသူ ၂ သောင်း ၅ သောင်းအထိ ရှိနိုင်တယ်လို့ မှန်းဆထားပါတယ်။
• ဒီစမ်းသက်စရာတခုကို အရင်က အွန်လိုင်းကနေဝယ်ရင် ၇၅ ပေါင်ပေးရတယ်။ အခုစမ်းသပ်စရာကိုတော့ လာမဲ့နှစ်မှာသာ ဆေးဆိုင်တွေပ်ါရောက်ပါမယ်။
• ယူကေ NHS ကနေ စက္ကန့် ၆ဝ အတွင်း ရှိ-မရှိသိနိုင်တဲ့ကိရိယာကို ၂ဝ-၃-၂ဝ၁၄ ကတည်းက အသိအမှတ်ပြုခဲ့ပါတယ်။
• US FDA ကတော့ OTC HIV test kit ကိရိယာကို ၂ဝ၁၂ ကတည်းကခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။ OraQuick ကိရိယာက ပါးစောင်နေရာက သွားရည်ကိုစမ်းရတာဖြစ်ပါတယ်။ မိနစ် ၂ဝ-၄ဝ သာကြာမယ်။
3:50 AM သတင်း No comments
အချက်ပြမှု ၂ ကြိမ် ဖမ်းယူရရှိခဲ့တဲ့ Ocean Shield သင်္ဘော
လေယာဉ်ရဲ့ Black Box က ထုတ်လွှတ်တဲ့ အချက်ပြမှု အမျိုးအစားနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ ထုတ်လွှတ်မှုတွေကို သြစတြေးလျ သင်္ဘောတစ်စင်းက ဖမ်းယူ ရရှိခဲ့တယ်လို့ မလေးရှား လေယာဉ်ပျောက်ကို ရှာဖွေနေတဲ့ သြစတြေးလျ အဖွဲ့ရဲ့ တာဝန်ရှိသူက ပြောပါတယ်။
သြစတြေးလျ ရှာဖွေရေး တာဝန်ရှိသူ Angus Houston က ပြောရာမှာ ဒီလို ဖမ်းယူ ရရှိတာဟာ အခုအချိန်ထိ အဖြစ်နိုင်ဆုံး လမ်းစ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီ အချက်ပြမှုကို သြစတြေးလျ ကမ်းရိုးတန်းနဲ့ မိုင် တစ်ထောင်လောက် အကွာ အိန္ဒိယ သမုဒ္ဒရာ တောင်ပိုင်းမှာ Ocean Shield သင်္ဘောက ဖမ်းယူနိုင်ခဲ့တာလို့ သူက ပြောပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒီ အချက်ပြမှုဟာ သေချာပေါက် မလေးရှား လေယာဉ်ပျောက်ရဲ့ Black Box ဆီက လာတာ ဟုတ် မဟုတ် အတည်ပြုဖို့တော့ ရက်အနည်းငယ် ကြာနိုင်တယ်လို့ သူက ဆိုပါတယ်။
Perth မြို့က ဘီဘီစီ သတင်းထောက်ကတော့ ဒီကိစ္စဟာ လေယာဉ်ပျောက် ရှာဖွေသူတွေ မျှော်လင့်နေတဲ့ သတင်းထူး ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
Flight recorder ရဲ့ ဘက်ထရီ ကုန်ခန်းတော့မှာ ဖြစ်လို့ လေယာဉ်ပျောက် ရှာဖွေသူတွေ အနေနဲ့ အချိန်မီ ရှာတွေ့နိုင်ဖို့ အရေးကြီးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
3:47 AM Free Proxy Updates No comments
Please comment for dead accounts so PRemium MM can serve you better
3:45 AM Android No comments
MyanPay အွန်လိုင်း ငွေပေးချေမှုစနစ်တွင် VISA Card များ စတင်အသုံးပြုနိုင်ပြီ
3:43 AM သတင်း 1 comment
MyanPay အွန်လိုင်း ငွေပေးချေမှုစနစ် (MyanPay Online Pay-ment Gateway) တွင် နိုင်ငံတကာသုံး ဗီဇာကတ်များ စတင်အသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ယခုလ ပထမအပတ်မှ စတင်ကာ အသုံးပြုနိုင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း တာဝန်ရှိသူက ပြောသည်။ “VISA Card အတွင်းမှာရှိတဲ့ ငွေတွေကို MyanPay ထဲမှာ မြန်မာကျပ်ငွေနဲ့ ချက်ချင်း (Instantly) ငွေသွင်းပြီး အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ယင်းက ပြောကြားသည်။ Myan Pay - Secure Online Payment တွင် ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁ ရက်နေ့မှ စ၍ Master Card စတင် အသုံးပြုနိုင်ခဲ့ပြီး ယခုဧပြီလ ပထမအပတ်မှစတင်ကာ VISA Card အား အသုံးပြုနိုင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဆက်လက်၍ ပြည်တွင်းရှိ MPU Card များ၊ Mobile Banking စနစ်များ၊ Mobile Money စနစ်များကိုလည်း Myan-Pay တွင် မကြာမီအသုံးပြုနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါ တာဝန်ရှိသူက ပြောကြားသည်။
“MyanPay အကောင့်အသုံးပြုဖို့ ဘဏ်တွေနဲ့ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရတာဖြစ်လို့ ဘဏ်ဖွင့်ရက်မှာသာ သွားရောက် ဆောင်ရွက်နိုင်တာပါ။ အခု VISA Card, Master Card တွေနဲ့ ငွေပေးချေနိုင်ပြီဆိုတော့ ဘဏ်ကိုသွားစရာ သက်သာသွားတာပေါ့” ဟု လက်ရှိ MyanPay အသုံးပြုနေသူတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။ MyanPay စနစ်မှာ အင်တာနက်မှတစ်ဆင့် ငွေပေးချေခြင်း၊ ငွေလွှဲပေးပို့ခြင်း၊ ငွေလက်ခံခြင်းတို့အား ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း ဖြစ်သည်။ ငွေလွှဲပေးပို့ရာတွင် Myan Pay အကောင့်အချင်းချင်း (သို့) ငွေလွှဲပြောင်း ပေးပို့လိုသူ၏ အီးမေးလ်လိပ်စာ သိရှိရုံဖြင့် ပေးပို့နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ပေးပို့လိုသော အီးမေးလ်ထံသို့ MyanPay အကောင့်တစ်ခုရယူ၍ ငွေလက်ခံရန်အကြောင်းကြား ပေးပို့ပေးကြောင်း သိရသည်။
ငွေလက်ခံရာတွင် အွန်လိုင်းပေါ်၌ အမြဲရှိနေရန် မလိုအပ်ဘဲ မိုဘိုင်းဖုန်းသို့ စာတိုပို့စနစ်ဖြင့် အကြောင်းကြားပေးကြောင်း သိရသည်။ ယခုကဲ့သို့ နိုင်ငံတကာကတ်များနှင့် အသုံးပြုလာနိုင်ခြင်းဖြင့် ရုံးပိတ်ရက်များတွင် အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ခြင်း၊ ၂၄ နာရီအသုံးပြုနိုင်ခြင်း စသည့် အားသာချက်များ ရှိလာမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆိုသည်။ လက်ရှိတွင် MyanPay ထဲသို့ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ ဘဏ်ခွဲပေါင်း ၅၁၀ ကျော်မှ ငွေသွင်း၍ရကြောင်း သိရသည်။ VISA Card အသုံးပြုသူများ အနေဖြင့် www.myanpay.com.mm သို့ ဝင်ရောက်ကာ Login ပြုလုပ်ပြီး ဗီဇာကတ်အတွက် သတ်မှတ်ထားသော Link ထံသို့ ဝင်ရောက်ကာ ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Telenor က ကိုယ်ပိုင်အင်တာနက်လိုင်းကို နိုင်ငံတကာနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး ဝန်ဆောင်မှုပေးရန်ရှိ
3:40 AM နည်းပညာ သတင်း No comments
နော်ဝေ ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီ Telenor က အစိုးရ၏ ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင် မရှိသည့် ကိုယ်ပိုင်အင်တာ နက်လိုင်းတစ်ခုကို နိုင်ငံတကာ အင်တာနက်ကွန်ရက်နှင့် ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနေပြီဖြစ်ကြောင်း ယခုလ ပထမပတ်အတွင်းတွင် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပသတင်းဌာနအချို့၏ တရားဝင် အင်တာနက်စာမျက်နှာများပေါ် ၌ ရေးသားဖော်ပြလာခဲ့ကြသည်။
Telenor Myanmar ကုမ္ပဏီသည် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင်အင်တာနက်လိုင်း တစ်ခုကို သီးသန့်တည်ဆောက် ရန်ရှိပြီး အဆင့်မြင့် အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုကို ပေးနိုင်ရန် လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြည်တွင်း မီဒီယာသို့ ပြောကြားခြင်းများ ရှိခဲ့သည်။
ယခုထွက်ပေါ်လာသည့် သတင်းများတွင် စင်ကာပူနိုင်ငံရှိ ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီမှဖြစ်သည့် TaTa မှ တစ်ဆင့် နိုင်ငံတကာ အင်တာနက်လိုင်းကို ချိတ်ဆက်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး ယင်းချိတ်ဆက်မှုသည် ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၈ ရက်က စတင်ခဲ့သည့်ဟု အထက်ပါသတင်းများတွင် ဆက်လက်ဖော်ပြထားကြသည်။
Telenor Myanmar ကုမ္ပဏီသည် မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းကို မမှီခိုသည့် နိုင်ငံတကာနှင့် ချိတ်ဆက် ထားသည့် ကိုယ်ပိုင်အင်တာနက်လိုင်းတစ်ခုကို တည်ဆောက်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး ယခုကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်မှု သည် မြန်မာနိုင်ငံ၌ ပထမဆုံးလုပ်ဆောင်လိုက်သည့် အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး ပထမဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။
3:28 AM Huawei C8816D Root 1 comment
Device ပြန်တက်လာရင် Root ရပါပြီ။
Font အတွက်ကတော့ ကျနော်က Smart_Zawgyi_Pro နဲ့ ထည့်လိုက်ပါတယ်။